Uncategorized – Bestnewsinfo
No Comments on पाथीभरा माताको दर्शन गरि आज २०७८ साल वैशाख १ गतेको राशिफल हेर्नुहोस हजुरको दिन शुभ रहनेछ
२०७८ वैशाख १ गते, बुधवार, १४ अप्रिल २०२१। चैत्र शुक्लपक्ष, द्वितीया तिथि (११ः१७ बजेदेखि तृतीया)। भरणी नक्षत्र (१६ः०६ बजेदेखि कृत्तिका)। चन्द्रराशि– मेष
No Comments on पशुपतिनाथ को दर्शन गरि आज फागुन 10 गते सोमबार को राशिफल हेर्नुहोस
२०७७ फागुन १० गते, सोमवार, २२ फेब्रुअरी २०२१। माघ शुक्लपक्ष, दशमी तिथि (१४:३२ बजेदेखि एकादशी)। मृगशिरा नक्षत्र (८:४२ बजेदेखि आर्द्रा)। चन्द्रराशि– मिथुन।
No Comments on सुपादेउराली माताको दर्शन गरि फागुन ७ गते शुक्रबार को राशिफल हेर्नुहोस !
२०७७ फागुन ७ गते, शुक्रवार, १९ फेब्रुअरी २०२१। पौष शुक्लपक्ष, सप्तमी तिथि (प्रात: ९ः१५ बजेदेखि अष्टमी), कृत्तिका नक्षत्र, चन्द्रराशि– मेष, प्रात: ८ः२४ बजेदेखि वृष।
मिहिनेतले राम्रो परिणाम दिलाउनेछ। तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्दै मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। व्यवसायमा भने लगानी बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातपार्न केही समय लाग्न सक्छ।
चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय छ। नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। पहिलेका कमजोरी बाहिर आउनाले प्रतिष्ठामा समस्या पर्न सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले सोचेको उपलब्धि तत्काल नपाइएला। आफ्ना सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। सामाजिक कामको जिम्मेवारी भने प्राप्त हुने समय छ।
पहिलेको सफलताले हौसला जगाए पनि विवाद तथा मुद्दाहरूमा निकै सजग रहनुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले अलि दुस्ख दिन सक्छन्। पछिका लागि भने विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। परिश्रम परे पनि लक्ष्य नजिक पुग्न सकिनेछ। ऋण, शत्रु र रोगबाट सजग रहनुपर्ला। विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
काम बन्नुका साथै सुखद समाचारले आशा जगाउनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउन सक्छ। पढाइमा गुरुजनको मार्गदर्शन उपयोगी हुनेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् भने मिहिनेतले प्रतिष्ठा पनि दिलाउनेछ। दिगो काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ। साझेदारीमा खटपटी बढ्नाले सम्झौता भंग हुन सक्छ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। अरूको सुझावमा भर नपर्नुहोला। परिवारजनको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ। तर महत्त्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला। आस लागेको काम बिग्रिए पनि मेहनत गर्दा पछिलाई फाइदा उठाउन सकिनेछ।
No Comments on पाथीभरा माताको दर्शन गरि आज फागुन ५ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस !
२०७७ फागुन ५ गते, बुधवार, १७ फेब्रुअरी २०२१। पौष शुक्लपक्ष, षष्ठी तिथि। अश्विनी नक्षत्र।
रमाइलो समय छ। मानसम्मान प्राप्त हुनेछ। तर, मनोरञ्जनमा अलमलिँदा काममा पछि परिनेछ। लोकाचारका लागि आतिथ्य खर्चिलो बन्न सक्छ। वादविवादमा अघि नसर्नुहोला। धैर्यसाथ प्रयत्न गर्दा नयाँ परिवेशमा नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफन्तबीच आत्मीयता बढ्नेछ। व्यावसायले रमाइलो यात्रा समेत गराउन सक्छ। नयाँ जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुनेछ।
साथीभाइ जुट्नाले काममा उत्साह जाग्नेछ र चाँडै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। दिगो काम थालनी हुनुका साथै विशेष उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। सेवामूलक काम सम्पादन हुन सक्छ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन्। मिहिनेतले सफलताको उचाइमा पुर्याउन सक्छ। प्रयत्न गर्दा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। पराक्रम बढ्नेछ र प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न पनि सकिनेछ।
No Comments on प्रधानमन्त्री ओलीले आज सरकारका तीन वर्षे उपलब्धि सुनाउने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सरकारको तीन वर्षे उपलब्धि सुनाउनु हुने छ । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका मुख्यमुख्य कामका उपलब्धि सुनाउन लाग्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार आज सोमबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिनु हुने छ ।
सिंहदरबारस्थित पुनर्निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा ओलीले तीन वर्षमा भएका कामबारे प्रेस विफ्रिङ गर्न लाग्नुभएको हो ।
ओली २०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारको पुनःनिर्माण हालै सकिएको छ ।
No Comments on मनकामना मन्दिर को दर्शन गरि आज फागुन ३ गते सोमबार को राशिफल हेर्नुहोस !
२०७७ फागुन ३ गते, सोमवार, १५ फेब्रुअरी २०२१। माघ शुक्लपक्ष, चतुर्थी तिथि उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र (१८ः२५ बजेदेखि रेवती)। चन्द्रराशि– मीन।
भैपरी आउने खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ। परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्। बेसुरमा काम गर्ने बानीले चुनौती निम्त्याउन सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। पतिपत्नीबीच घरसल्लाह नमिल्न सक्छ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन र व्यापारमा फाइदा हुनेछ। मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ।
प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। कर्मयोगले भविष्यको बाटो समाउनेछ। पहिलाे प्रयासमै काम बन्नेछ। सेवामूलक कामबाट उपलब्धि हातलागी हुनेछ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। मिहिनेतले लाभ दिलाउनेछ। समस्या पन्छाएर अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि केही अवसर पाइनेछ। तर ठूलो फाइदा नदेखिएकाले लाभ उठाउन हतार नगर्नुहोला। परिस्थितिवश चिताएको काममा समस्या आउन सक्छ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। जीवनशैली व्यस्त रहे पनि कम महत्त्वका काममा समय दिनुपर्ला। चिताएका काममा बाधा पुग्न सक्छ। जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
अस्वस्थताले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। काममा केही ढिलासुस्ती हुन सक्छ। नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइत पर्खनुपर्नेछ। अप्रिय समाचारले मन खिन्न बनाउला। अध्ययनमा पछि परिनेछ भने व्यापारमा सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ। नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा ध्यान पुर्याउनुहोला।
छोटो समयमा मनग्गे फाइदा हुनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। विशेष उपहार प्राप्त हुन सक्छ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुने समय छ। व्यापारको बहानामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। आम्दानी बढ्नुका साथै जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउनेछ।
केही दौडधुप गर्नु परे पनि पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। दिगो काममा जग बसाउने मौका छ। पुरुषार्थी कामले समाजमा स्थापित बनाउन सक्छ। स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ।
स्वास्थ्यमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ भने चिताएको काममा विलम्ब हुन सक्छ। समयको मागअनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ। अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। समयको तालमेल नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ। मिहिनेतको प्रतिफल न्यून हुनेछ।
तत्कालको सामान्य फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। बेसुरमा बोल्ने बानीले दु:ख पाइनेछ। विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। काम बिग्रने डरले सताउनेछ, वादविवादमा अघि नसर्नुहोला। साझेदारीमा मतभेद देखा पर्नाले समस्या आउन सक्छ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सहयाेग जुट्नेछ। योजना गोप्य रहँदा फाइदा हुनेछ।
अध्ययनमा विशेष प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सुखद् समाचारले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो काममा सम्झौता गर्ने समय छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ। बौद्धिक अभिव्यक्तिको तारिफ हुनेछ। बोलीको प्रभावले आर्थिक लाभ समेत दिलाउन सक्छ।
तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। नयाँ अवसरले उत्साह जगाउनेछ भने सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ। आकर्षक उपहारसमेत प्राप्त हुनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुने र नयाँ काम पाइने योग छ। पारिवारिक जमघटले आनन्द दिलाउनेछ। मिहिनेतले आत्मविश्वास पनि बढाउनेछ।
एकदमै दुर्लभ पाइने जिवित नै दाहिने शंख को दर्शन गरि आज माघ २९ गते बिहीबार को राशिफल हेर्नुहोस!
No Comments on एकदमै दुर्लभ पाइने जिवित नै दाहिने शंख को दर्शन गरि आज माघ २९ गते बिहीबार को राशिफल हेर्नुहोस!